Ra’isulwasaare Saacid oo maanta ka qeybgalay dibadbax lagu taageerayo xiriirka u bilowday Soomaaliya iyo Mareykanka – idalenews.com
Ra’isulwasaare Saacid oo maanta ka qeybgalay dibadbax lagu taageerayo xiriirka u bilowday Soomaaliya iyo Mareykanka
Dibadbaxan oo uu soo qaban qaabiyay Maamulka gobolka Banaadir ayaa waxaa ka soo qeyb Galay Masuuliyiin katirsan labada gole ee dowladda oo uu horkacayay R/wasaaraha Xukuumadda federaalka Soomaaliya C/Faarax Shirdoon Saacid gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Maxamuud Axmed Nuur Tarsan Iyo boqolaal dadweyne ah oo ka kala yimid 17-ka Dagmo ee gobolka Banaadir.
Isusoobaxayaasha ayaa watay boorar ay ku xardhanyihiin sawirada Madaxda dalka mudane Xassan Sheekh Maxamuud iyo Sawirka M/weynaha Mareykanaka Barak Obama iyo erayo kale Oo ay ku taageerayaan go’aankii dowladda Mareykanka ee ay ku Aqoonsatay dowladda Soomaaliya iyo soo celinta xiriirkii ka dhaxeeyay.
Gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa bananbaxayaasha u sheegay in wax logu farxo Ay tahay in la aqoonsado dowladda Soomaaliyeed taas oo saaxada caalamka ka maqneyd Muddo labaatan Sano ka badan.
Wasiirka Arimaha Gudaha Iyo Amaanka Qaranka mudane C/kariim Xuseen Guuleed ayaa isna Bananbaxa ka sheegay in isusoobaxan uu astaan u yahay in shacabka Soomaaliyeed aysan raali Ka noqon Karin in la kala googaayo wadankooda.
R/wasaare C/faarax Shirdoon Saacid oo isna la hadlay dibadbaxayaasha ayaa sheegay in Go’aankaan uu dhacay iyadoo Soomaaliya ay mareyso waqti xasaasi ah loona baahanyahay in Dowladaha caalamka ay qaataan tusaalaha dowladda Mareykanka ay qaadatay.
R/wasaare Saacid ayaa soo hadal qaaday arimaha Amaanka Dalka isagoo sheegay in shacabka Soomaaliyeed ay kaalin wax ku ool ah ka qateen xasilinta Amaanka magaalada Muqdisho hase Ahaatee waxa uu bananbaxii maanta kaga dhawaaqay mashruuca tartanka Ololaha Nadaafadda Gobolka Banaadir kaas oo dagmadii kaalinta koowaad ka gasha ay muteysan doonto Abaal Marin lacageed oo qiimaheedu Gaarayo 15 kun oo doolar.
Qaar ka mid ah dadweynaha isaga kala yimid dagmooyinka Gobolka Banaadir oo iyaguna ka Hadlayay dareenkooda ayaa sheegay in ay aad ugu faraxsanyihiin taageerada dowladda Mareykanka iyo tartanka Ololaha Nadaafada ee uu iclaamiyaya R/wasaaraha Dalka.
Isu soobaxa maanta lagu taageerayay Aqoonsiga dowladda Mareykanka ay siisay dowlada Soomaaliya ayaa qeyb ka ah bananbaxyo is daba joogay oo tadobadkan ka dhacay gudaha dalka Iyo meelaha Soomaalidu ay caalamka kaga suganyihiin iyadoo dadweynaha Soomaaliyeedna ay Ku cabirayeen dareenkooda ku saabsan heshiiskaasi caalamiga ah ee ay soo hoysay dowladda Soomaaliya.
Wasiirka adeega Bulshada oo kulan looga hadlayo horumarinta Caafimaadka la qaatay hay’adda Caafimaadka aduunka
Macallimiinta Haweenka ee dalka Qatar oo laga mamnuucy inay wax ka dhigaan Dugsiyadda Wiilasha u gaarka ah.